YEYINTNGE(CANADA): Sunday, May 12
မြန်မာနိုင်ငံက လူကုန်ကူးသူ ၂ဦးဖြစ်တဲ့ Hasyim and Rasyed ဆိုသူ တို့ကို အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေက ဖမ်းစီး ရမိပြီလို့ သိရပါတယ်။
သြစတြေးလျ နိုင်ငံထဲမှာ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံလိုသူတွေကိုလူမှောင်ခို ကူးနေတဲ့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဘီလူးဆိုသူကိုလည်း ဖမ်းစီးရမိခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အင်ဒိုနီးရှား ကမ်းလွန်မှာ လှေတစင်း နစ်မြုပ်သွားရာက လူပေါင်း ၉၀ပျောက်ဆုံးသေဆုံး ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား ရဲတွေက လူပေါင်း ၁၀၀လောက်တင်ဆောင်ထားတဲ့ လှေတစီးကို ဘီနိုဟာ ဆိပ်ကမ်းအနီးတဝိုက်မှာ မျောနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး လှေရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းလိုသူ တွေကို တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။စက်လှေမောင်းနှင်သူ Iskandar and Agus ဆိုသူ ၂ဦးကိုလည်း ဖမ်းစီးခဲ့ပါတယ်။ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကို ဦးဆောင်နေသူကို ခိုလှုံခွင့်တောင်းလိုသူတွေနဲ့ ဂိုဏ်းထဲမှာ ပါဝင်ကြသူတွေက ဘီလူးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့သာ သိနေကြပြီး သူတို့နှစ်ဦးဟာ Jawed Muhmud and Hasan Bilu အစရှိတဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရားခံ ဘီလူးက သြစတြေးလျနိုင်ငံ
ကို လှေ ၄ စီးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဝင်ခံခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံက လူကုန်ကူးသူ ၂ဦးဖြစ်တဲ့ Hasyim and Rasyed တို့ ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေး မေးမြန်း နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/12/2013 1 အကြံပြုခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်၏ သမီးဖြစ်သူ ချယ်ဆီးကလင်တန်သည် ရန်ကုန်မြို့ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် မေလ(၂၇)ရက်
နေ့၊ မနက်(၁၀)နာရီမှာ ကျင်းပမည့် P&G ၏ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သောက်ရေသန့်
(၆)ဘီလီယံ လီတာမြောက် လှူဒါန်းဖြစ်မြောက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်း
အနားကိုတက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မစ္စချယ်ဆီးကလင်တန်သည် ကလင်တန်ဖောင်ဒေးရှင်းဘုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို(၂၅) ရက်နေ့ကတည်းက ကြိုတင် လာရောက်ကာ P&G နှင့် WorldVision တို့ပူးပေါင်းလှူဒါန်းမှုလုပ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံဒေသများနှင့်သာ ပေါင်း၊လွိုင်ကော်၊ဘားအံ၊ ကော့သောင်း၊ လောင်းလုံ၊သရက်ချောင်းဒေသ
များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။P&G
သည် ကမ္ဘာပေါ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်များကို“ရေသန့်စင်ထုပ်”များ လိုက်လံ
လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၂၀၀၈)ခုနှစ်မှာနာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်
များအတွက် သောက်ရေသန့်လီတာပေါင်း(၂၅)သန်းကျော်ကို ဖန်တီး
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး(၂၀၁၁)ခုနှစ်တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့သောဒေသ များကို
နောင်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက်ရေသန့်ထုပ်(၄.၅)သန်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိ World Vision တွင်ကြိုတင်ပေးအပ်လှူဒါန်းထားကြောင်း
ရသော သောက်သုံးရေကိုမရရှိသည့် အခြေအနေများကြောင့် ဝမ်းပျက်
သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် P&G အနေဖြင့် Children's Save Drinking
Water အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး လာမည့် (၂၀၂၀)ခုနှစ်အထိတစ်နှစ်ကို
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/12/20130အကြံပြုခြင်း
Joint Typhoon Warning Center(JTWC)က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းပုံ photo: JTWC
လာမယ့် မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ မဟာဆန် (Mahasen) အမည်ရ အင်အားပြင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကြောင့် ဒီကနေ့ကစတင်ပြီး မောင်တောမြို့မှာ ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်တွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
အလားတူ စစ်တွေမြို့အပါအ၀င် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ကုန်းတွင်းပိုင်းနေရာတွေကို စတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီလို့ ဒေသဆိုင်ရာ အရာရှိတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးသန်းက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"တကယ်လို့ မုန်တိုင်းဝင်လာရင် ဘယ်နားကိုရွေ့မယ်၊ ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းက သွားမယ်၊ အဓိကကတော့ စစ်တွေပေါ့လေ၊ စစ်တွေမှာ ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၁ ခုရှိတာပေါ့လေ၊ ၁၁ ခုထဲက ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဒီကနေ့စရွှေ့မှာပေါ့လေ"
ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မြို့တွေအားလုံးမှာ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အသံချဲ့စက်တွေနဲ့ လိုက်လံကြေညာပေးနေပြီး ပင်လယ်ပြင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေကိုလည်း မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေကို အလေးထားလိုက်နာကြဖို့ သတိပေးနှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာပဲ မောင်တောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးက ကူညီကယ်ဆယ်ရေး၊ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ပြုစုကုသရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ ကော်မတီငယ် ၁၁ ခုကို ဒီနေ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး မောင်တောမြို့အတွင်းက လေးမိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နှစ်မိုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ အထကကျောင်းတွေကို မုန်တိုင်းဒဏ် ခိုလှုံမယ့်နေရာတွေအဖြစ် ရွေးချယ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ကျောက်ဖြူခရိုင်မှာလည်း မုန်တိုင်းရန်ကာကွယ်ဖို့အတွက် မြို့နယ်နဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတစ်ရပ် မနေ့က ကျင်းပခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်တွေကို ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံးအဘွားအိုမှာ အသက် ၁၁၆ နှစ် ၅၁ ရက် အရွယ်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသူ Besse Cooper ဖြစ်ပြီး ၁၈၉၆ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသူ အဘွားအို ဒေါ်မြကြည်မှာ အသက် ၁၁၈ နှစ် ရှိနေပြီး အသက်ကြီးဆုံး အဘွားအိုထက် ၂ နှစ်ခန့်ကြီးနေကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ အဘွားဒေါ်မြကြည်ကို ဂင်းနစ်စာရင်းဝင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ Online သုံးစွဲသူများမှ ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Now (The Oldest Grandma) in the Guinness World Records is Besse Cooper - 116 Year and 51 days old, Lives in American. But the truth is, there isagrandma who is2year older then Besse Cooper. Her name is Mya Kyi - 118 years old, Lives in Amarapura, Pou Chine Kone Village, Myanmar.
i love Myanmar စာမျက်နှာမှ မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်တွေကို နိုင်ငံရေး အမွေဆက်ခံတဲ့ စစ်တစ်ပိုင်း
အစိုးရတစ်ခုလုံးကို သမဝါယမအစိုးရအဖွဲ့ လုပ်ခိုင်းကြမှာလား။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်'s photo.
၁၉၉ဝ ဇန်နဝါရီမှာ ကျွန်တော် အူကျရောဂါ ရတယ်။ အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်း လဲတဲ့အဖြစ် ဆိုက်တယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ဘာကုသမှုမှ မလုပ်ပေးဘူး။ ပြောမရ ဆိုမရဘဲ။ ၅ နှစ်တိတိ ကြာတယ်။ နောက်ဆုံး အူတွေခေါက် သေမလောက် ဖြစ်မှ ဆေးရုံပို့တယ်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ခွဲစိတ်ခန်းထဲကို တိုက်ရိုက်ပို့ရတယ်။ ခွဲစိတ်ရတယ်။ လူတော့ မသေဘူး။ မွေးရာပါ တစ်ရှဉ်းတော့ “နတ်သင်း” ဖြစ်ရတယ်။
မြန်မာ အင်ဒီပဲန်ဒင့်ဂျာနယ်။ ။ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂
ပဋိပက္ခ သတင်းလုပ်ကြံဖြန့် သူက မီဒီယာသင်တန်းပြုလုပ်မယ်
လာမဲ့ မေလ-၁၉-ရက်နေ့ မှာ စစ်တွေမြို့ ရွှေသဇင်ဟိုတယ်မှာ ပဋိပက္ခ အဖြစ်မခံနိုင်သော သတင်းစာသင်တန်းကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက် မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒါရိုက်တာဒေါ်သင်းသင်းအောင်က ဦးဆောင်ဟောပြော ပို့ ချမယ်လို့သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ နယ်မှာ ဒီလိုပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးခြင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကရော- ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေကပါ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်စေရေးအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘယ်သူကမှ ပညာပေးသင်တန်းတွေ ပေးနေစရာ မလိုဘူးထင်တယ် ။ သတင်းဋ္ဌါနအနေနဲ့သူတို့ ရဲ့သတင်းထောက်တွေကို သင်တန်းပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ပြုလုပ်လို့ ရတယ် ။
ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ ဒီလိုပဋိပက္ခဖြစ်စေခြင်းများကို အဖြစ်မခံရအောင် သင်တန်းပေးတာမျိုး- ဟောပြောတာမျိုး-လက်လွပ်စပယ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေကို တစုံတရာ ပြောဆိုရေးသား ပြုလုပ်ကြပြီဆိုရင် အထိမခံဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အနေအထားမှာ အနာတရ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဆိုတာတွေဟာ ချက်ချင်း ပေါ်ပေါက်စေတယ် ။ ဒါတွေဟာ ကြပ်တည်းစွာသတိထားရမဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် ။ ဥပမာအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်-မင်းကိုနိုင်တို့ တွေတောင်မှ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စကားပြောရင်တောင်မှ ဆင်ခြင်ပြောရင်တောင် အနှောင့်အသွား မလွပ် ဖြစ်နေတာကို ကြည့်ရင် တချို့ နေရာတွေမှာ အထူးသိထားရမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ထားဖို့ လိုတယ် ။ ဒီလို လူထုလေးစားတဲ့လူတွေတောင်မှ ရခိုင်အရေးနဲ့ပါတ်သက်လာရင်တောင် ဝေဖန်ခံနေရရင် အခုလို မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒါရိုက်တာဒေါ်သင်းသင်းအောင်လို လူစားမျိုးက ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ပဋိပက္ခအဖြစ်မခံနိုင်သော မီဒီယာသင်တန်း ဟောပြောပွဲကို ပြုလုပ်မယ် ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာဖြစ်ရတယ် ။
ဒေါ်သင်းသင်းအောင်ဟာ ကျွန်တော်သိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့နယူးဒေလီမြို့ မှာ နေထိုင်စဉ် -DVB- ရေဒီယိုသတင်းဋ္ဌါနမှာ အပါတ်စဉ် ရေဒီိယိုဇါတ်လမ်းပမာကို စနေနေ့ တိုင်း ရေးသား ထုတ်လွှင့်ခဲ့ တာ နှစ်ပေါင်း ( ၁၀ နှစ်ကျော် ကြာ ) အချိန်ထိဘဲဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်နဲ့ရဲရင့်အောင် ( ယခုသြစတေးလီယား ) တို့ နှစ်ဦးဟာ ပင်တိုင်ဇတ်လမ်းပမာ ရေးသား ထုတ်လွှင့်သူဖြစ်တယ် ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ထုတ်ဝေတဲ့အာဟာရစာစောင်မှာလဲ ကျွန်တော်နဲ့ရဲရင့်အောင်ဟာ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်အဖြစ်ရေးသားနေခဲ့ ကြတယ် ။ နယူးဒေလီမှာ ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့ စည်းပြီး စာပေအနုပညာရှင်များ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းတဲ့ အခါ ကျွန်တော်က ဥက္ကဋ္ဌ-ကိုရဲရင့်အောင်က အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ တယ် ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒေါ်သင်းသင်းအောင်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီ မြန်မာစာပေအနုပညာရှင်လောကမှာ ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေးသူ- ကဗျာတပုဒ်ရေးသူ အဖြစ် သူမကို စာရေးဆရာတယောက်အဖြစ် ကဗျာဆရာတယောက်အဖြစ် ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ် မပြုကြဘူး ။ ဒီတော့ စာရေးဆရာ တယောက် မဟုတ်တဲ့လူတဦးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မီဒီယာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဟောပြောမလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ နယူးဒေလီက ရဲဘော်ကျော်သန်းဟာ ဒီအကြောင်းကြားရင် တော်တော် ရီမောနေလိမ့်မယ် ။
သေချာတာ တခုကတော့ မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနဟာ ထာဝစဉ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတဲ့သမိုင်းလိမ်ကုလားလူမျိုးကို ပဋိပက္ခဖြစ်စေအောင် ဖန်တီးလုပ်ကြံရေးသားနေတဲ့သတင်းဋ္ဌါနဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်တယ် ။ လွန်ခဲ့ တဲ့ လက အမေရိကပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ ကို ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း-၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ-ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့လူထုတွေ့ ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ တယ် ။ အဲဒီတွေ့ ဆုံပွဲမှာ ကျွန်တော်က မီဒီယာများနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဝန်ကြီးဦးခင်ရီကို တင်ပြပြောဆိုခဲ့ တယ် ။ အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတ်သက်လို့မီဒီယာတွေဟာ သတင်းအတည်ပြုချက် မယူဘဲ ရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြတယ် ။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကအစ ၀န်ကြီးဦးခင်ရီ အပါအ၀င် အစိုးရတရပ်လုံးကပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး( ၁၃၅ ) မျိုးသာ ရှိတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ် ။ ဒီလိုကြေညာထားပါလျှက်ကယ်နဲ့မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါန- ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌါန-နဲ့အခြား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဋ္ဌါနတွေဟာ သမိုင်းလိမ်ကုလားလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကို ဖေါ်ပြပြီး အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း- ဖြေဆိုခြင်း-ထုတ်လွှင့်ခြင်း-ရေးသားခြင်းများစွာကို ပြုလုပ်ကြတယ် ။ တကယ်လို့အဲဒီလို ထုတ်လွှင့်ရေးသားမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အမှန်တကယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး( ၁၃၅ ) မျိုးထဲမှာ ပါဝင်ရဲ့ လားဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဋ္ဌါနများကို သတင်းအတည်ပြုချက် ရယူရမှာဖြစ်တယ် ။ အခုတော့ သတင်းအတည်ပြုချက် မယူဘဲ ရေးသားဖြန့် ချီ ထုတ်လွှင့်နေတာကြောင့်မို့ လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခုအချိန်မှာ သွေးချောင်းစီးပဋိပက္ခကို ဖြစ်စေနေတာဖြစ်တယ် ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ လို ဒီရေးသားနေတဲ့မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါန-ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌါနဲ့အခြားရေဒီယိုသတင်းဋ္ဌါနများကို သတင်းအတည်ပြုချက် မယူဘဲ ပြုလုပ်နေကြတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုအရေးယူရမှာလဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းခဲ့ တာဖြစ်တယ် ။ ၀န်ကြီးဦးခင်ရီက အခုလို ဒီသတင်းအတည်ပြုချက် မယူဘဲ ထုတ်လွှင့်ရေးသားနေသူတွေလဲ ရှိနေတဲ့ အတွက် အရေးယူစရာလဲ လုပ်ရမှာပါဘဲလို့ဖြေဆိုခဲ့ တာရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးဦးခင်ရီဟာ မီဒီယာဥပဒေအပိုင်းနဲ့မပါတ်သက်တဲ့ အတွက် မီဒီယာဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဋ္ဌါနနဲ့မီဒီယာဥပဒေကို ပါဝင်ရေးဆွဲနေတဲ့မီဒီယာသမားတွေ သိရှိစေဖို့တင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် ။ လွပ်လွပ်စွာရေးသားခွင့် ကို မီဒီယာသမားတွေက ရရှိသလို မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ လဲ သတင်းအတည်ပြုချက်များနဲ့သတင်းတည်ဆောက်ပြီးမှ ထုတ်လွှင့်ရေးသားရတဲ့ဥပဒေဆိုတာ ရှိရပါမယ် ။ သတင်းအတည်ပြုချက် မယူဘဲ အခုလို နိုင်ငံကို အကြည်ညို ပျက်စေလောက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကို ဖေါ်ပြရေးသား ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရင် ဥပဒေအရ အရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေလဲ ထုတ်ပြန်ထားဖို့ လိုတယ် ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေတဲ့မီဒီယာသတင်းသမားတွေဟာ သတင်းများကို အတည်ပြုယူဖို့ အတွက် ပြည်တွင်းက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဋ္ဌါနဖြစ်စေ ရဟန်းရှင်လူ တဦးဦးကိုဖြစ်စေ အထောက်အကူပြု အတည်ပြုချက် ယူကြရတယ် ။ ဒီလိုမှသာ သတင်းက ခိုင်လုံမှု ရှိကြတယ်ဆိုတာ လက်ခံကြတယ် ။ ဒီတော့ခါ မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တဲ့ပဋိပက္ခသတင်းများနဲ့ ဖေါ်ပြနေခဲ့ ချိန်မှာ ဘယ်လို သတင်းမျိုးကို ဦးစားပေး ဖေါ်ပြနေခဲ့ သလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရင် အားလုံးနားလည်ကြမှာဖြစ်တယ် ။ ခုအချိန်မှာ မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနက ဒါရိုက်တာ ဒေါ်သင်းသင်းအောင်က ပဋိပက္ခအဖြစ်မခံနိုင်သော မီဒီယာသင်တန်းကို ဟောပို့ ချမယ်ဆိုတော့ ဒါတွေကို စဉ်းစားရမှာဖြစ်လာတယ် ။ ပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်သော သတင်းများကို လုပ်ကြံရေးသား ဖြန့်ချီနေသူများက မီဒီယာသင်တန်း ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာဟာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိတဲ့အကြောင်းအရာသာဖြစ်တယ် ။
နောက်ပြသနာ တခုက ဒေါ်သင်းသင်းအောင်ဟာ မူဆလင်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီး တဦးဖြစ်တယ် ။သူမကဲ့ သို့မူဆလင်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး တဦးက ရခိုင်လူမျိုးတွေကို သင်တန်းပေး ဟောပြောမယ်ဆိုတာကို လူထုကြားမှာ သတင်းဖြန့်ချီတာနဲ့ပါတ်သက်လို့နယ်မြေငြိမ်းချမ်းစပြုနေတဲ့စစ်တွေမြို့ ဟာ ဆန္ဒပြမြို့ တမြို့ အဖြစ် နောက်ထပ်မြို့ တမြို့အဖြစ် ရောက်လာနိုင်စရာ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူမကို အခုလို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မှာ ဆရာကြီးလို သင်တန်းပေးတာမျိုးတာတွေကို ဘယ်လိုမှ လက်မခံတဲ့ သူဖြစ်တယ် ။ သူမရဲ့အကျင့်စာရိတ္တ ဘယ်လိုမကောင်းဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့နုတ်မှ ထုတ်ဖေါ်ပြောရလောက်အောင် စိတ်ပျက်လွန်းတာကြောင့်မပြောဘဲနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို တခြားလူတွေ ပြောကြပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်လက်မခံတာက သူမဟာ စာရေးဆရာ တယောက်မဟုတ်ဘူး- ကဗျာဆရာ တယောက်မဟုတ်ဘူး- ဘလော့ဂါတယောက်လဲ မဟုတ်ဘူး- ဒါ့ကြောင့် သူမလို လူတယောက်က ကျွန်တော်တို့စစ်တွေမြို့ မှာ ဆရာကြီးပုံစံနဲ့လုပ်မဲ့ အရာ ဟူသမျှကို ရွံရှာတာလဲ ပါတယ် ။ စစ်တွေမြို့ ကို ခြေချခွင့်တောင် မပေးသင့်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ သူမကို တနေရာ ထားရမှာဖြစ်တယ် ။
မိဇျမ္မသတင်းဋ္ဌါနအနေနဲ့သူတို့ ရဲ့သတင်းထောက်များကို သတင်းရေးသားနည်းနဲ့ရေးသားခြင်း သင်တန်းများ ပေးလို့ ရတာမှန်တယ် ။ အဲဒီလို ဆိုရင် အဲဒီသင်တန်းကို မူဆလင်လူမျိုး ဘင်္ဂလီကုလားတွေက လာရောက် တက်လာခဲ့ ရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ဆိုတာမျိုးကော တွေးတောထားရမှာ လိုလာပြန်တယ် ။ တက်လာခဲ့ ရင် နယ်မြေ ဆူပူ လာမယ် ဆိုတာ သတိထားဖို့ လိုတယ် ။ ဒါကြောင့်လဲ ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀န်းမှာတော့ မိဇျိမ္မသတင်းဋ္ဌါနက ထုတ်ဝေဖြန့် ချီမဲ့ဂျာနယ်-သတင်းစာ စသည်တို့ ကို ဘယ်ရခိုင်လူမျိုးကမှ ၀ယ်ယူအားမပေးဖို့သတိပေး မေတ္တာရပ်ခံထားပါရစေ ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းစပြုနေတဲ့ရခိုင်အရေးကို ဘယ်သူကမှ နည်းမျိုးစုံနဲ့သပ်လျှိုပြီး ကောက်ကျစ်စွာ နေရာယူဝင်ကြခဲ့ ရင် ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာဟာ အဲဒီလူတွေကြောင့်လို့ပြောရမှာဘဲ ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့စစ်တွေမြို့ရွှေသဇင်ဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်မဲ့အဲဒီအစီအစဉ်ကို ခွင့်ပြုကြသူများ အားလုံးကို လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ဆက်လက်ပြီး အဲဒီအစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲများဖြင့် နယ်မြေမငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပွါးလာနိုင်စရာ ရှိပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
credit to http://www.myanmardailynews.org/2013/05/blog-post_8878.html
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းများ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ ရှိသော တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် ပါမောက္ခချုပ် များသည် ၀န်ထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းများ၊ ခွင့်တိုင်ကြားခြင်းများ နှင့် နေရာဒေသပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းများ အတွက် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပဲနှင့် ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ တင်ပို့ပေးခြင်းမရှိပဲပြုလုပ်နေသည့်အတွက် အမှန်တရားများပျောက်ကွယ်ကာ မမျှတမှုများနေရာ အနှံ့၌ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၀န်ကြီးဌာနမှ တက္ကသိုလ်များအတွင်း၌ ဖြစ်ပွားနေသော ကိစ္စရပ်များကို အမှန်တကယ် သိရှိနိုင်မှုမရှိပဲ လွှဲမှားစွာ ဆုံးဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသဖြင့် ၀န်းထမ်းများ၏ မှန်ကန်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများအား ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော ၀န်ကြီးဌာနသို့ တင်ပို့ပေးရန် တောင်းခံသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ၀န်ထမ်းများ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
T.H.S လို ၈ တန်းအောင်ပြီးတက်လို့ရတဲ့အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းတွေခေါ်
အရင် T.H.S လို ၈ တန်းအောင်ပြီးတက်လို့ရတဲ့အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းတွေထပ်ခေါ်
ပြီG.T. I ပေါင်းကူးလဲရှိတယ်ပြောတယ်။
Transport Ministry Magazine မှ ဘုန်းဘွဲ့တော် ဆောင်းပါး ။
Credit to Ko Moe Aye and ဖက်ဖက်
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတရားဝင်သတင်းစာဖြစ်သည့် People's Daily Newspaper ၏ ဆောက်လုပ်လက်စ ဌာနချုပ်သစ်
CREDIT TO ဖက်ဖက်
အသက်က ၃၂နှစ်ဆိုတော့ အခြားရောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဆရာတွေ လာဘ်စားရင် အလုပ်ထုတ်မယ် စစ်တွေ တစ်မြို့လုံး ယတြာချေ
rတိုင်းရင်းသားနှင့် နိုင်ငံသား မတူညီပါ။
ဦးဆုံး ဒီနိုင်ငံရဲ့စကားကို ပြောတတ်အောင် ကြိုးစားပါ။